SHIR XILLIYEEDKEE GUDIDA BULSHADA SOMALILAND EE U | Toggaherer's Weblog
GUDIDA DHAQAALADA GOLAHA WAKIILADA OO MAANTA WARBIXIN KA DHIIBAY SOCDAALKOODII.
SHIR XILLIYEEDKEE GUDIDA BULSHADA SOMALILAND EE UK
UK 09 June 2009 (THN)
Casarkii maalintii Axadii oo taariikh ahaan ku abaarnayd 06 June 2009, waxa ka qabsoomay Galbeedka magaalada London shir xilliyeedka Somaliland Society in UK (SSUK).
Xaflad agaasiman isu dheelitiran aad u heensays-naa ayaa lagu qabtay Galbeedka Magaalada London.
.Ururka SSUK ayaa ah mid kow iyo taban sano (11) Baarka ka jartay lana aasaasay 1998, gudoomiyaheedii ugu horeeyayna ahaa Ilaah ha u naxariistee Xaaji Aadan Qabilleh.
Iba-furka shirka ayaa ku bilaabmay Wacdi taabanayay qiimahuu u leeyahay qofka muslimka ah Waqtiga, Sheekh Siciid Axmed Faarax oo taabanay qiimaha waqtiga ayaa ku suntay inuu Qofka Muslimka ah ay tahay inuu waqtigiisa si aada u jeedaaliyo una dhawro kuna maal gashado wax naftiisa iyo Aakhiradiisaba dhaxal gal u noqda. Isagoo dhinaca kale taabtay Ahmiyada ay leedahay Ururada Khayriga ahi , marka ay yihiin kuwa ku qotoma Ujeedo wanaagsan Ilaahay dartiina loola iisho.
Intaas ka dib ayaa xidhiidhiyaha Barnaamijka C/Fataax Ibraahim Sheekh cod baahiyaha u dhiibay Gudoomiya xilka wareejinayay Mudane Maxamed Cumar Maygaag , ayaa halkaa ka jeediyay khudbad dhinacyo badan taabatay. Wax-qabadkii gudida SSUK mudadii ay xilka hayeen ayuu maxamed halkaa ka akhriyey. Dhinacyada ay wax ka qabteena ay ka md ahaayeen ka dhaadhicinta iyo agaasinka hawlaha Somaliland, sida mudaharaadyo lagu taageetayay qadiyada Somaliland, soo dhaweynta madaxda dalka ugu sareysa , Agaasinka xafladaha ku dhawaaqida Somaliland ku dhawaaqideeda iyo arimo la xidhiidha guud ahaan is garab taaga qadiyada Somaliland.
Gudoomiyuhu dhinaca kale waxuu tilmaamay caqabadaha ka hor yimi mudadi ay xilka hayeen , kuwaasoo ay ugu waynaayeen dhinaca dhaqaalaha, isku xidhnaan la,aanta xafiiska Somaliland ku ledahay dalka iyo jaaliyada u ololeeya qadiyada Somaliland guud ahaan. Sidoo kallena waxuu ku booriyay jaaliyada Somaliland inay wada shaqayn yeeshaan kuna taageeraan dhaqaale ururkan SSUK.
Gabagabadiina waxuu halkii ka akhriyay xisaab cellintii Ururka isagoo u rajeeyay gudida cusubna in Ilaah la garab Gallo hawshaa tabaruca ah. Intaas kadibna waxa la magacaabay gudida cusub ee ururka SSUK oo kala ah:
Axmed Daahir Cilmi – Gudoomiye
Bashiir Maxamed Cabd I – Gudoomiye xigeen
Saamiya Cabdi Maxamed – Khasnaji
Cabdifataax Ibraahim Sheekh – Xogahaya Guud
Cali Axmed Roobleh – Xogahaye Xigeen
Mustafe Ismaaciil Axmed – Khasnaji Xigeen
Qaasim Xasan Mataan -Xubin
Axmed Cali Caydiid -Xubin
Gudoomiya xilligan ee SSUK Axmed Daahir Cilmi isagoo ku hadlaya magaca gudida cusub waxuu mahad celin u jeediyay Gudidii hore ee ururka , sidoo kalana soo jeediyay warbixin kooban oo nuxurkeeda xambaarsanaa wada shaqaynta iyo sida wax loo tari karo dalkii hooyo. Kuna sheegay in talaabo socodku ka bilowdo. Waxqabdkoodana ay ku salanyan doonaan a) wada shaqayn ay la sameeyaan ururada kale ee ku hawlan arikan oo kalle b) dhiirigelin iyo ka qayb qaadasho isku xidh aqoonyahanada qurba jooga ah iyo kuwa dalkii c) Diiwaan gelinta ururka SSUK dalkan UK d) kobcinta xunabaha ururka , isagoo dhinaca kallena sheegay in taageerada jaaliyadu ay tahay mid biyo kama dhibcaan ah , la,aanteedna aanay waxba qabsoomayn.
Madasha shirka ayaa waxa si aan hagrasho lahayn Suugaan baaxad weyn kula wadaagay Madasha Abwaan Cali Axmed Raabi (Cali-Seenyo) iyo Abwaan Faysal Aw cambalash sacab iyo hugun badana u dhacay mudadii ay murtida tirinayeen.
Gebagabadii gudida cusub ayaa halkaa mahad celin uga soo jeediyay kasoo qayb galayaashii shirka.